दिल्लीमा महिलालाई सार्वजनिक यातायात निःशुल्क, नेपालमा कहिले ? « GDP Nepal
दिल्लीमा महिलालाई सार्वजनिक यातायात निःशुल्क, नेपालमा कहिले ?
Published On :4June, 2019 11:50 am
नयाँदिल्ली (एजेन्सी): नेपालको दक्षिणी छिमेकी भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा महिलाले निशुल्क सार्वजनिक यातायात सुविधा पायने छन् । दिल्लीका झण्डै १० लाख महिलालाई सार्वजनिक यातायात सेवा निःशुल्क दिल्ली सरकारले जानकारी दियो ।
राज्य सरकारले ल्याएको उक्त योजनाअन्तर्गत आगामी दुईदेखि तीन महिनाभित्रमा करिब आठ लाख ५० हजार महिलालाई सेवा दिने गरी अघि सारिएको हो ।
नयाँ दिल्लीमा सन् २०१२ मा एउटा निजी बसमा विद्यालयबाट घर फर्किरहेका समय एक छात्रामाथि सामूहिक वलात्कारपछि हत्या गरिएपछि यसलाई महिलाको सुरक्षाका दृष्टिकोणले असुरक्षित भएको महसुस गरिँदै आएको थियो । सन् २०१२ को उक्त घटनालाई लिएर भारतभर विरोध भएका थिए ।
दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले निःशुल्क सेवा प्रदान गर्न वार्षिक एक अर्ब १५ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने बताएका छन् । योजनाअन्तर्गत केही समयभित्र करिब एक लाख ५० हजार सार्वजनिक यातायातमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरिनेछ जसका कारण ती यातायातका साधनमा यात्रा गर्दा उनीहरूले सुरक्षित महसुस गर्नेछन् ।
सरकारले यस कार्यक्रममा साना तथा पुराना गाडीलाई विस्थापित गरी ठूला तथा नयाँ गाडी भित्र्याउने र यसबाट दिल्लीको ट्राफिक प्रदूषणलाई पनि कटौती गर्न मद्दत पुग्ने अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
नेपालमा भने महिलाका लागि यस्तो व्यवस्था छैन । स्थानीय र प्रदेश सरकारले यस विषयमा हालसम्म कुनै योजना नबनाए पनि आगामी दिनमा अनुशरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।